आज कोरोना संक्रमणबाट थप ७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि «
आज कोरोना संक्रमणबाट थप ७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि
प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७७, मंगलवार १६:३७
काठमाडौँ, २ भदौ । आज थप ७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । योसँगै मृतकको संख्या ११४ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेहरुमा काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके, कास्की र तनहुँका एक–एक जना रहेका छन । निधन हुनेमा ६ जना पुरुष र एक महिला रहेका छन् । तनहुँमा महिला र बाँकी जिल्लामा पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट आज थप १ हजार १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यसको पुष्टि गरेका हुन् । संक्रमितहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ५ जना रहेका छन् । त्यसमध्य काठमाडौं जिल्लामा १३८ जना, ललितपुरमा ५० जना र भक्तपुरमा १७ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।
यो संगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या २८ हजार २५७ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८५ जना निको भएका छन् । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किनेको संख्या १७ हजार ५८० जना पुगेका छन् ।